साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक सामान्य घटेको छ । बजार खुलेदेखि सामान्य उतारचढावमा रहेको नेप्से मध्याह्नपछि बढेको थियो । तर, सोही गतिलाई निरन्तरता दिन नसक्दा कारोबारको अन्तिम १ घन्टा अवधिमा बजार पुनः ओरालो लागेको थियो । १ हजार ५ सय ९ दशमलव २० बिन्दुबाट सुरु भएको बजार शून्य दशमलव ८९ अंक घटेर १ हजार ५ सय ८ दशमलव २५ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
कारोबारमा आएका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, बिमा समूह र माइक्रोफाइनान्स समूहका परिसूचक घटेपछि नेप्से घट्न पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो ब्याजदरले केही दिनयता बजार प्रभावित भएको देखिन्छ । नेप्से सामान्य ओरालो लागे पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम भने बढेको छ ।
यस दिन १ सय ६३ कम्पनीको ५ हजार २ सय १९ पटकको कारोबारमा रु. ५६ करोड ८३ लाख २१ हजार ७ सय ७९ बराबरको १२ लाख २५ हजार ५४ कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । यस दिनको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा ११ दशमलव १७ प्रतिशत बढी हो । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव २७ अंक घटेर ३ सय १७ दशमलव ८० बिन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ४६ दशमलव ६३ बिन्दुमा पुगेको छ । आरएसआई न्युट्रल जोनमा रहेका कारण बजारमा सेयर खरिद–बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ । यस दिन लगानीकर्ताको सम्पत्ति अघिल्लो दिनको तुलनामा रु. १ अर्ब ४ करोड घटेर रु. १७ खर्ब ५३ अर्बमा सीमित भएको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडको सेयर सर्वाधिक खरिद–बिक्री भएको छ । यस दिन सो वाणिज्य बैंकको रु. ३ करोड २० लाखबराबरको सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । यस बैंकले १०० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ बराबर २ दशमलव ८१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सेबोनमा आवेदन दिएको प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको सेयरमूल्य यस दिन ६ दशमलव ९१ प्रतिशत बढेको छ ।
२० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको सहयोगी विकास बैंक र २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य यस दिन ५ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । ललितपुर फाइनान्सको सेयरमूल्य भने यस दिन ८ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ६३ कम्पनीमध्ये ६४ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने ८४ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी १५ कम्पनीको सेयरमूल्य भने यस दिन स्थिर रहेको छ ।
सोमबार ट्रेडिङ समूहको परिसूचक सर्वाधिक ३ दशमलव शून्य ६ अंक बढेको छ । त्यसैगरी, ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत, उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत, जलविद्युत्् समूहको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत र होटेल समूहको शून्य दशमलव ११ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको विकास बैंक समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत, बिमा समूहको शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत र माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ११ प्रतिशत घटेको छ ।